Mahadhadii iyo Shirqoolkii Madaxwene John F.Kennedy | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Dabeecadaha Noocyada Shakhsiga Bini’aadanka.
Warsame Maxamed Nuur Garaad Noor, June 15, 2017
Fursadaha Waxbarashada Jaamacadaha Norway
Jama Hursow, April 18, 2018
Cabdillaahi Cismaan Cabdillaahi — May 29, 2020
Madaxweyne Jack F. Kennedy aabbihii wuxuu ahaa Joseph P. Kennedy oo Dagaalkii 2aad ee adduunka ahaa Ambassador-ka Mareykan u fadhiya Great Britain. Intii uu London joogey ayuu shirkadaha khamriga “Whisky-ga” ee Scotland lagu sameeyo qandaraas kula galay in uu keligii Mareykan u dhoofin karo. Ganacsigaas, dakhli badan oo gaadhaya balaayiin Dollar ayuu ka helay.
Ambassador Joseph P. Kennedy wuxuu dhalay afar wiil oo kala ahaa Joseph P. Kennedy-Jr, Jack F. kennedy, Robert F. Kennedy, Edward F. Kennedy.
Ambassador Joseph P. Kennedy wuxuu ku adkaa in wiilashiisu u tartamaan Madaxweynaha dalka Mareykanka isaga oo wixii dhaqaale ku baxay u hurayey. Wiilkii u weynaa ee uu madaxweynaha u waday Joseph P. Kennedy-Jr dagaalkii 2aad ee adduunka ayuu ku dhintay, dabadeed kii xigay oo ahaa Jack F. kennedy oo Jaamacada Harvard University wax ku bartay ayaa markii dagaalkii laga soo noqday u tartamay kursiga Aqalka Sare ee Congress (Senate) kuna guuleystay.
Senator Kennedy wuxuu 1960 isu sharraxay Madaxweyne, waxaanu la tartamay Richard Nixon oo markaa ahaa Madaxweyne-ku-xigeenkii Dwight Eisenhower.
4tii November, 1960kii isaga oo 43 gu’ jira, wuxuu noqday Madaxweynihii ugu horreeyey ee Mareykan ah oo qarnigii labaatanaad (Twentieth Century) dhasha, wuxuuna ahaa Madaxweynaha keliya ee Mareykan ee heyta “Mad’habta Roman Catholic” ee Kiristaanka, iyada oo shacbiga mareykanku u badan yihiin “Mad’habta Protestant-ka” ee Kiristaanka.
Dagaalkii 2aad ee adduunka wuxuu taliye ka ahaa Markab PT-109 iyo Markab PT-59 (Sub marine) oo badda hoosteeda gantaalada kaga toogan jirtay maraakiibta badda dusheeda mara, waxaanu ka dagaallamay Badweynta “Pacific”. Markii uu tartamayay wuxuu odhan jiray markaan dagaallamayay cidina I ma weydiin jirin “Mad’habtayda”, waxaanu hal’hays u lahaa: “Ha isweydiinina waxa dalkiinnu idiin qaban karo, ee isweydiiya waxa aad dalkiinna u qaban kartaan”.
Madaxweyne Kennedy waxaa lagu dilay magaalada Dallas, Taxes, oo uu booqanayay 22kii November, 1963kii, iyada oo ay la socoto Marwadiisa Jackie. Guddi uu Hoggaaminayay Chief Justice Warren ayaa loo xil-saaray in uu baadho dilkaas oo lagu eedeyay Lee Harvay Oswald oo Mareykan ah oo ka shaqaynayay daar ku dhow waddadii gaadhiga Madaxweynuhu marayay.
Warbixinti Warren Commission waxay ahayd in Lee Harvay Oswald uu dabaq sare (Book store) ka toogtay Madaxweyne Kennedy, dabadeedna Oswald oo cararaya dartaas dibaddeeda ayay nin bilays ah iskaga hor yimaadeen, ninkaana uu dilay, ka dibna waa la qabtay.
Subaxdii 23kii November isaga oo saldhig bilaysku lahaa laga soo saarayay oo Maxkamadda loo waday ayaa dadkii saldhigga dibaddiisa ku urursanaa nin ka mid ah, oo Jack Ruby la odhan jiray, bastoolad la soo baxay oo Oswald toogtay. Jack Ruby Maxkamad ayaa la saaray, Hasayeeshee cusbitaalka ayuu ugu dhintay cudurka Cancer-ka.
Warbixintii Warren “Commission” ka-sakow shaki badan ayaa jiray in dilaaga Kennedy aanu ahayn Lee Harvay, waxaana dad daawanayay madaxweynaha oo tubnaa meel taag sare ah “Grassy Knoll” oo dhinaca kale ka ah daartii Book store-ka ay sheegeen in nin laangadhe ahaa uu xabbado riday, dabadeedna dadkii halkaa tubnaa ku dhex dhuuntayn.
Maadaama dadka dareenkoodu ku maqnaa Madaxweyne Kennedy rasaasta lagu riday, ninkaa lama qaban. Buugag badan ayaa dilkii Kennedy laga qoray hasayeeshee warbixintii Warren “Commission” ayaa ugu dhow xaqiiqada.
Tags: Mahadhadii iyo Shirqoolkii Madaxwene Kennedy
Next post Madax-Addeega Caruurta Maxaa U Daawa?
Previous post Barashada Habka ugu Fiican ee Caruurta Loo Tarbiyeeyo Loona Barbaariyo
About the Author Cabdillaahi Cismaan Cabdillaahi
Waa qoraa ka tirsan Afrikaan.so wuxuu wax ka qoraa dhaqaalaha, siyaasada, sooyaalka, suugaanta, wuxuu diraaseeyaa taariikhda iyo dhaxalka umaddaha. Qoraaga ayaa ah shaqsi jecel afkeena hodanka ah wuxuuna yiri "Waxaan jeclahay af Soomaaliga waxaan u taaganahayna sidii aan usoo nooleyn lahaa dhaqanka iyo sooyaalkii ay lahayd umadda Soomaaliyeed." Aqoonta qoraaga waa heerka koowaad ee jaamacada, wuxuuna bartaa Bangiyadda iyo Maaliyada.